IMIGAQO YEVANDERPUMP 'IARIANA MADIX IDUNYISWA NGENXA YEFOTO YEENDABA YENTLALO ENGACOCWANGA - IINDABA
Imigaqo yeVanderpump 'iAriana Madix idunyiswa ngenxa yeFoto yeendaba yeNtlalo engacocwanga
UAriana Madix wayehlala ebomini bakhe obuhle eLas Vegas.
Ngaphantsi kweeveki ezimbini ngaphambilana kwemigaqo ekudala ilindelwe ye-Vanderpump Rules yexesha le-9, inkwenkwezi yeBravo eneminyaka engama-36 yabelana ngemifanekiso kunye neemovie ze-Instagram ezivela kubomi beentsuku ezintathu zoBomi buMhle obubanjelwe edolophini iVasgas. Abalandeli abaninzi bangena kwi-pic yendalo yonke nangona uMadix ekwabelwana ngayo kwicandelo.
Kumfanekiso, ibartender ye-SUR yexesha elide ibime kwicandelo kumculo nakwimidlalo yoluntu kwaye ibambe ngovuyo isiselo sayo. UMadix wayenxibe i-mini gown emnyama, i-baseball cap, kunye neebhutsi ezimnyama zokulwa njengoko wayevela kwakhona kwi-digicam. Lo mfanekiso unike umbono wokuba simahla kwiifilitha okanye kwibhrashi yomoya.
Uqala ', uMadix uchaze umfanekiso.
Abafaki babulela iMadix ngokuthumela iifoto 'zoqobo'
Kwinxalenye yokupapashwa, inani labalandeli labulela uMadix ngokungacoci umfanekiso wakhe.
Ngaba ndingabulela nje ngokuthumela imifanekiso yokwenyani? fan enye yabhala.
Wenza ixesha lam lobusuku, omnye wavuma.
Umfazi we-Yassss ukongeza ukuthanda ukuba awuyi kucoca imifanekiso yakho !!!! Ubonakala umhle, fan ye3 yabhala.
I-bernie madoff yamaxwebhu e-netflix
Ndize kuthetha OKUFANAYO! Ubungangamsha bokwenyani obufanelekileyo apho, omnye wongezwa.
Abanye bachaze ubunyani bokwenyani beMadix njengokuhlaziya.
Sihlala sinoThixo wethu WENDALO U-ARIANA, umlandeli wabhengeza.
I-Madix iye yaVocwa ngokuBhekiswa kwiiNgxaki zaKhe ngokuBekwa komzimba
UMadix wongezwa ngokuzithemba kwi-bikini kuhambo lwakhe lonke. Ubulele iqabane lakhe uScheana Shay udade, uCortney Erin, ngokuqondisa zonke ii-angles ezichanekileyo.
Abalandeli bexesha elide bayazi ukuba iMadix ibinamanqaku amancinci kunye nomzimba wayo. Kwisiqendu se-2018 seMigaqo yeVanderpump, ababukeli babemangalisiwe xa evula isibini esidlulileyo sobudlelwane obuhlukumezayo apho wayeyalelwe ukuba uyinto elizothe.
Ndandisoloko ndifundiswa ukuba ubufazi bam bucekisile, kwaye ndine-cellulite, kwaye, 'Kutheni ubeka loo nto?' Kwaye, 'Kutheni unganxibi ngoluhlobo?' Kwaye 'Kutheni ungabonakali ufana naba bafazi? Kwaye le micimbi ayipheli. utshilo. Ngamaxesha onke bendinala manqaku ngokuzithoba kwam, ngomzimba wam, ezi zinto zisuka kum ngaphambili.
Kwisiqendu, inkwenkwezi kaMadix uLala Kent wamyalela ukuba uphumelele. UKent wongeze ukuba umama wakhe umfundisile ukuba nombulelo kwisiqingatha ngasinye sakhe nokuba ntsasa nganye ubonakala ngathi ufana nesipili kwaye uthi ndiyakuthanda emzimbeni wakhe.
Ngelixa waqhekezayo ekhululekile kubudlelwane bakhe bokuhlukumeza. I-Madix iye yafuna ukujongana ne-physique shamers ngoku ikwindawo yoluntu. Uyalele uE! Iindaba zokuhamba kwexesha, ngalo lonke ixesha ethumela nawuphi na umfanekiso, abantu bayamazisa ukuba akabonakali ngathi.
Andicingi ukuba ifuna ukuthathelwa ingqalelo nangona kunjalo ndizuze ngaphezulu kwe-20 kilos okoko ndaqala umboniso wokuqala kwaye ndihlala ndiyalelwa ukuba ndifumene i-filler ezidleleni zam kwaye ndiyazithemba kakhulu malunga nokuba nobuso obukrwada Kwaye maxa onke bendinqwenela i-angular jawline kunye ne-angular cheekbone, utshilo. Ke xa abantu besitsho, andicingi ukuba niyayiqonda indlela eniziphethe ngayo. Ngokwenyani uxela umthwalo endiwufumene ebusweni bam kwaye luhlobo lokucaphuka.
ngu-selena: imovie kwi-netflix
UMadix wongeze ukuba ukwazile ukususa konke ukungakhathali kwaye wagxila nje kubantu bokwenyani ebomini bakhe.
Indlu yakho kunye ne-pals yakho yintoni efunekayo kwaye bonke aba bantu bahlukeneyo? Ayisiyonyani leyo, inkwenkwezi yeVanderpump Rules ikhankanyiwe.
Izigaba: Hulu Iindaba Amazon-Prime
UVictoria wakile umsesane wokuzibandakanya
ubutyebi md imivumbo itanki yokrebe
u-gordon ramsay kwi cocain
ngu jordani knight ongatshatanga
ixesha lokuhamba lokufa 6 isiqendu 9 uphononongo